Archives des Faits-Divers - Page 1169 sur 1357
Ambatondrazaka : Namidiny teo an-tsena ny zanakan’anadahiny
Zanaky ny anadahiny izay nalainy avy any Tanambe Alaotra ity nentiny nihazo an’Ambatondrazaka handehaha hamidy .Nihazo avy hatrany ny Station Alaotra ity ramatoa ity ary dia nitady mpividy an’ity zazavavy izay vao 8 taona ity. Nitangoronan’ny olona ilay zaza ; izay azo lazaina ho tsara tarehy. Hitan’ireo miaramila tao amin’ny Station Alaotra ny raharaha ka itsy…
Faritra Analanjirofo : Mpangalatra voasambotra : nokapaina ny tongony
Nofandrihana ary nametrahana paikady mahomby mba hisamborana ireo olon-dratsy. Efa fantatry ny olona ao an-toerana loatra mantsy ny fanaon’ireto jiolahy. Nahomby tokoa izany satria olona telo no indray sarona teo am-piotazana ireo jirofo. Raha araka ny vaovao azo avy any an-toerana dia mpianaka izy telo ireo. Tafatsoaka ny roa fa ilay raim-pianakaviana kosa taraiky teo.…
Toliara : Sady mandroba no midaroka ny jiolahy
Nisy trangana fanafihana-jiolahy mitam-piadiana indray tao Toliara, ny harivan’ny zoma teo, tokony ho tamin’ny enina ora. Jiolahy dimy mitam-basy tsy nisaron-tava no nanafika tokantrano iray tao amin’ny fokontany Antaninarenina. Lasan’ireo jiolahy tamin’izany ny lelavola 3 tapitrisa ariary niampy volamena mitentim-bidy iray tapitrisa sy efatra hetsy ariary ary ny finday rehetra tao amin’ity tokantrano ity. Naratra…
Isotry : Mpandendaka telo lahy voasambotra
Nahazo vaovao ny mpitandro filaminana fa miverina indray ny asa fanendahana sy sinto-mahery arahana tsindrona antsy amin’ny faritra maromaro eny Ambodin’Isotry, Andranomanalina, Tetezan’i Bekiraro, Tetezan-dRamala. Manao andiany telo na efatra ireo jiolahy ireo. Ny sabotsy tokony ho tamin’ny 12 ora sy 40 minitra teo ho eo no nahazoan’ny polisy ity filazana ity. Tsy niandriandry ny…
Fakàna ny Lapan’i Mahazoarivo : Karohina ilay jeneraly tonga teny amin’ny Lapa
Nandeha ny feo ny faran’ny herinandro lasa teo fa hisy fikononkononana fanonganam-panjakana, ka tafiditra ao anatin’izany ny fakàna ny Lapan’ny Praiministra eny Mahazoarivo. Vokatr’izay dia saika niatrana am-bava-basy avokoa ireo hery vonjitaitra teo an-drenivohitra. Manjavozavo ihany na dia efa hita misoritra ihany aza ny tao ambadik’ity fanelezana tsaho ity. Raha ny fantatra mantsy, araka ny…
RN7 : Basy sy bala tratra tao anaty fiara
Basy poleta iray sy bala miisa 17 no indray tratra tao anatin’ny fiara iray nentin’ny tovolahy izay saika nizotra tamin’ny lalam-pirenena fahafito ka saika hihazo an’andrenivohitra. Nandritry ny fisavana taratasin’ny fiara nataon’ny zandary no nahatsikaritra zavatra hafahafa tao anatiny izy ireo. Vokatr’izany dia nasaina nivoaka ny mpamily ary nosavaina tanteraka ilay fiara kely. Inona tokoa…
Olona enina maty an-drano
Fahafatesana maromaro indray no niseho tamin’ny faran’ny herinandro lasa teo. Raha ny marina kokoa, fahafatesana tany anaty rano avokoa. Toerana vitsivitsy manerana ny faritra no nisehoan’izany. Voalohany, teny Mandroseza tovolahy vao 18 taona no namoy ny ainy dobo tao anaty ano. Ny loharanom-baovao no nahalalana fa nandeha nilomano izy io ary dia rendirka teny. Ny…
Toerana tsy azo ifohana sigara : Tsy voafaritr’izany ny eny an-dalambe
Voalazan’ny loharanom-baovao marim-pototra fa mpitandro filaminana roa no nanakana teratany vahiny nifoka sigara teny an-dalambe, teny amin’iny faritra Alarobia iny, taorian’ny fampiharana ilay didy mahakasika ny fifohana sigara, ny zoma lasa teo. Araka izany dia mitàna ny sain’ireo mpanara-baovao mihitsy ity didy navoaka efa ho herintaona lasa ity, saingy mihatra ankehitriny. Ny avy amin’ny polisim-pirenena…
Toliara : Tovovavy 16 taona noterena hanambady lehilahy 52 taona, nandositra
Raha ny loharanom-baovao marim-pototra dia tovovavy iray 16 taona, voalaza fa maditra najanona tamin’ny fianarana, no noteren’ny ray aman-dreniny hanambady lehilahy iray 52 taona mpanarivo, ka nitsoaka ny trano fonenany nanomboka ny zoma antoandro teo, ary tsy mbola hita tsy tafody any an-tranony hatramin’izao ora anoratanay izao (omaly 13 h 30). Raha ny fanazavana azo…
Miandrivazo : Un touriste français agressé avec une hache
Il a choisi le circuit moyen-ouest qui mène vers belo-sur-Tsiribihina pour son passage dans la Grande île. Une virée qui a tourné au cauchemar lorsque des bandits l’ont attaqué durant une escale à Sahambany, un village situé dans la localité de Miandrivazo. Avec ses deux guides, ils devaient rester sur place pour passer la nuit.…
← Précédente 1 … 1 168 1 169 1 170 … 1 357 Prochain &arr;